लुम्बिनी विकास कोषको प्रष्टीकरण– लोकप्रिय मन्त्री आलेलाई बदनाम गर्न खोजियो – Nepal Press
२०७८ माघ ३ गते १८:२४
काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले गुरुयोजना विपरित लुम्बिनीमा रिसोर्ट खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरेको भन्दै आएका समाचारप्रति लुम्बिनी विकास कोषले असहमति जनाएको छ ।
कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गुरुयोजनाविपरित कुनै पनि निर्णय नभएको बताए ।
गुरुयोजनाभित्र पर्यटकको सुविधाका लागि क्याम्पेन ग्राउण्ड निर्माण र सञ्चालनका लागि सम्सरा वेलनेस रिसोर्टको तर्फबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै भएको कोषले जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो गुरुयोजनाविपरित कुनै रिसोर्टको संरचना बनाउन दिने निर्णय नभएको सदस्य सचिव शाक्यले बताए ।
पछिल्लो समय जनप्रिय कदमका कारण लोकप्रिय भएका मन्त्री आलेलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीसँग जोडेर समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै कोषले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
कोषका कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री आले र उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तयबीच सम्बन्ध विग्रिएको भन्दै भ्रम छर्ने काम भएको भन्दै कोषले भिक्षु नियमित कार्यतालिका अनुसार क्यानडा गएको जनाएको छ ।
कोषले भनेको छ, ‘भिक्षु मैत्तय नियमित प्रत्येक वर्ष क्यानडामा डिसेम्बरदेखि दुई महिने धर्म प्रचार तथा ध्यान सिकाउन कार्यतालिका अनुसार मन्त्रीको स्वीकृतिमा नै उहाँ क्यानडा जानुभएको जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
प्रकाशित: २०७८ माघ ३ गते १८:२४
One thought on “लुम्बिनी विकास कोषको प्रष्टीकरण– लोकप्रिय मन्त्री आलेलाई बदनाम गर्न खोजियो”
लाेकप्रिय के का लागि ? अरूले गरेकाे सम्झाैताखारेज गरे भनेर ?अनि त्यसकाे विकल्प दिएका छन् यिनले ? विकल्प सहित काम गरे मात्र लाेकप्रिय । पशुपतिकाे धर्मशालाबाट बतासलाई हटाएमा त्याे भवन गाँजा खानेकाे अखडा बन्छ । वरिपरिका सबैकाे पाईखाना बन्छ । यसकाे विकल्प खाेई आलेसँग ? हायातकाे सरकारी जग्गा सरकारकाे नाममा ल्याएकाे भाेलिपल्ट यिनलाई लाेकप्रिय भनाैंला । अन्यथा किन भन्ने ? के थाहा बताससँग माधवले पैसा मागेकाे नदिएकाे झाेकमा आले मार्फत कारवाही अघि बढाएकाे भन्नेकाे कुरा पनि सही हाे कि ?